Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fiara Fanatanjahantena vaovao mitentina latsaky ny $30,000
Miaraka amin'ny herin'ny soavaly sy torque bebe kokoa, ny anatiny sy ivelany nohavaozina ary ny vidin'ny varotra atolotry ny mpanamboatra (MSRP) manomboka amin'ny $ 27,700 fotsiny, ny GR2022 86 vaovao rehetra dia lafo be.
Tonga any amin'ny mpivarotra Toyota tamin'ny volana Desambra ary azo alaina amin'ny kilasy roa, GR86 sy GR86 Premium, ny taranaka vaovao amin'ny fiaran'ny mpamily Toyota dia mitondra fialamboly ara-panatanjahan-tena mora vidy, miaraka amin'ny motera 2.4 litatra lehibe kokoa izay manome hery mihoatra ny 18% ary torsi 11%.
Ny kilasy GR86 Premium dia mandeha amin'ny kodiaran'ny alimo mainty 18-mirefy 10 mirefy miaraka amin'ny kodiaran'ny Michelin Pilot Sport 4® ary mpandroba duckbill lehibe ao ambadika. Ao anatiny, misy seza enina azo amboarina azo amboarina amin'ny loko mainty sy volafotsy misy fanafanana avo roa heny ary lafaoro UltraSuede misy lavaka miaraka amin'ny bolster hoditra. Ny lantom-peo mainty sy volafotsy dia mitohy hatrany amin'ny familiana hoditra, ny boot shift ary ny frein tanana. Ny rafitra multimedia 8-inch vaovao misy fanamafisam-peo valo dia mitondra fifandraisana sy feon-kira ho an'ny mpamily.
Ny kilasy GR86 dia mipetraka amin'ny kodiaran'ny alimo vita amin'ny milina 17-mirefy 10 mirefy vita amin'ny milina vita amin'ny kodiarana Michelin Primacy HP®. Ny endri-javatra anatiny dia ahitana lamba mainty G-embossed enina azo amboarina miaraka amin'ny bolster amin'ny lafiny lamba fanatanjahan-tena miaraka amin'ny vinyl misy soratra sy lamba fanatanjahan-tena eo amin'ny dash, varavarana ary familiana. Ny rafitra multimedia 8-inch vaovao miaraka amin'ny mpandahateny enina dia tonga manara-penitra.
Misy amin'ny safidy amin'ny fifindran'ny manual na paddle shifted automatique, tonga amin'ny safidy amin'ny loko ivelany fito: Track bRED, Halo White, Steel Silver, Pavement Grey, Raven Black ary Neptune na Trueno Blue. Ny taranaka vaovao koa dia manamarika ny fivoarany amin'ny filaharana Gazoo Racing miaraka amin'ny logo GR86 angular vaovao miaraka amin'ny marika GR an'ny Toyota. Tombanana ho tonga eny amin’ireo mpivarotra Toyota ireo maodely amin’ity volana desambra ity.